Ngwa 8 n'efu iji lee mkpanaka gị na PC gị Gam akporosis
8 free ngwa ele gị mobile na PC gị
Ignacio Lopez | 09/04/2021 22:00 | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, lee moba na PC na-enye ha ohere ịbawanye arụ ọrụ, ọkachasị mgbe ọ metụtara ọrụ. Agbanyeghị, maka ọtụtụ ndị ọzọ, ọ bụ ụzọ iji ngwa dị naanị na ekwentị anyị, dị ka WhatsApp, jiri nkasi obi na kọmputa anyị.
Dika teknụzụ enwegoro, ndị ọrụ aghọwo ndị dabere na smartphone, ebe nke a na-enye anyị ohere ịme ihe ọ bụla anyị chọrọ, site na ịse foto, ịdekọ vidiyo, izipu ozi email, ịlele akaụntụ akụ, ịkpọ oku vidiyo ... yana oku (doro anya).
Mgbe anyị na ekwentị anyị na-emekọrịta ihe, anyị ga-eleba anya n'ụdị ojiji anyị chọrọ ime: jiri ngwa ma gosipụta ha na ihuenyo ma ọ bụ jikwaa ọdịnaya dị n'ime, ebe ọ bụ na ọbụghị ngwa niile na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ abụọ ahụ.
4 Nke Mobizen
6 Ekwentị Microsoft gị
8 Onye nwe ha
Site na aha a enweghi aha a na-ekwupụta ekwupụta, anyị nwere ngwa mmeghe dị egwu na-enye anyị ohere igosipụta ihuenyo nke ama anyị na PC Windows, Linux, na ọbụna macOS.
N'adịghị ka ngwa ndị ọzọ na-enye anyị ohere ịmekọrịta ọdịnaya na ihuenyo ahụ, na scrcpy ọ na-egosi naanị ihe a hụrụ na ihuenyo, anyị enweghị ike iji ngwa ndị anyị arụnyere na ngwaọrụ mkpanaaka
Ngwa a dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdekọ ihuenyo nke ama gị na PC na-enweghị iji wụnye ọ bụla ngwa na smartphone. Naanị ma ọ bụ na anyị ga-eji gam akporo Debug Bridge (ADB) ngwa anyị nwere ike budata site na njikọ a.
Anyị ga-arụ ọrụ USB Debugging, na-akpọghe ndị mmepe nhọrọ. N'ikpeazụ, anyị ga-etinyerịrị ngwa a soro ntuziaka zuru ezu. Njikọ ahụ mere eriri, ya mere, a ghaghị ijikọ ngwaọrụ abụọ na otu netwọk Wi-Fi.
N'ihi AllCast, anyị nwere ike ịtụgharị uche na ngwa kọmputa anyị site na ihe nchọgharị ihuenyo nke ama anyị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ịdekọ ihuenyo, anyị ga-enwe budata ngwa ahụ na weebụsaịtị ya.
AllCast anaghị ekwe ka anyị chịkwaa ngwaọrụ ahụ na PC dị ka a ga - asị na ha na - ekwe ka anyị mee ngwa ndị ọzọ, mana ọ bụrụ na ebumnuche bụ ilele ọdịnaya ahụ na nnukwu ihuenyo, nhọrọ a kpamkpam n'efu O zuru ezu karịa.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ohere ị na-elele mkpanaka na PC, ma ọ bụ Windows, Linux ma ọ bụ macOS, anyị ga-ekwurịrị banyere otu n'ime ngwa agha ndị kachasị na ahịa: AirDroid N'adịghị ka ndị ọzọ ihe ngwọta, mgbe ejikọta anyị ama na kọmputa, ọ na-egosi na ya interface na nwere ihe ọ bụla na-eme na oyi akwa aha nke ama ama.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ ga-enye anyị ohere ịnweta nke ọ bụla n’ime ngwa ndị anyị tinyere na kọmputa, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ iji WhatsApp ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ dị naanị maka ama, anyị nwere ike ime ya na ngwa a.
Nkwurịta okwu a rụrụ na a ikuku site na ama IP, ya mere, a ghaghị ijikọ ngwaọrụ abụọ na otu netwọk Wi-Fi.
Enweghị mkpa ịwụnye ngwa ọ bụla na kọmputa, ebe ọ bụ na ịnweta site na ihe nchọgharị ọ bụla, na-abanye IP nke smartphone na ngwa AirDroid na-egosi anyị ozugbo anyị wụnye ya na ngwaọrụ ahụ.
AirDroid-ime ohere na nnyefe faịlụ
Developer: ANDjá STUDIO
Mobizen bụ ngwa na-enye anyị ohere ịlele mobile anyị na PC, agbanyeghị, isi ọrụ ya bụ dekọọ ihuenyo nke ama anyị. Iji mee nke a, anyị ga-etinye ngwa ma na ekwentị mkpanaaka anyị na Windows PC (enweghị ụdị maka sistemụ ndị ọzọ).
Na mgbakwunye na ịlele ihuenyo na PC anyị, anyị nwekwara ike ijikwa ọdịnaya niile echekwara na ama anyị. Ọ na-arụ ọrụ ikuku na ihe IP, dị ka AirDroid. N'ime 3 nde ọrụ na nkezi fim nke 4,3 kpakpando kwadoo ngwa a n'efu.
Mobizen Screen edekọ
Ngwa nke na-enye anyị ohere ileba anya na ekwentị mkpanaaka na PC, na-enweghị frills na nke ahụ kwekwara Windows, macOS, Linux na ihe nchọgharị ọ bụla bụ Vysor, ngwa ngwa n'efu nke na-enye anyị ohere ijikọ ama ama anyị na PC site na eriri, yabụ enweghi lag obula na ọ bụrụ na anyị nwere ike ịchọta na njikọ site na Wi-Fi.
Iji jiri ngwa a, ọ dị mkpa ka anyị rụọ ọrụ USB debugging site na nhọrọ ndị nrụpụta. Otu ugboro jikọọ smartphone site na USB na kọmputa, anyị na-emeghe ngwa na pịa na View bọtịnụ.
Vysor - Nchịkwa gam akporo na PC
Ekwentị Microsoft gị
Otu n'ime ngwa kachasị mma dị ugbu a na ahịa iji lee ihuenyo nke ama anyị na kọmputa anyị, soro ya na-emekọrịta ma nweta ọdịnaya ya niile bụ Microsoft ekwentị gị, ngwa nke na-arụ ọrụ aka na Samsung smartphone, ma ọ dịkarịa ala mmekọrita lee ihuenyo na kọmputa anyị.
Ọ bụrụ na anyị nwere ama Samsung, anyị nwere ike iji ngwa Microsoft ekwentị gị jikwaa ngwaọrụ ahụ kpamkpam na kọmputa anyị, nke na-enye anyị ohere imepe ngwa arụnyere na ekwentị ma soro ha na-emekọrịta ihe n’emetụghị ekwentị ahụ aka.
Ọ bụrụ na ị nwere nke Samsung smartphones, ma ọ bụ mgbe e mesịrị ụdị, nke m zuru ezu n'okpuru, i nwere ike iji ọrụ a:
Samsung A8s AX
Samsung A30s AX
Samsung A31 AX
Samsung A40 AX
Samsung A41 AX
Samsung A50 AX
Samsung A50s AX
Samsung A51 AX
Samsung A60 AX
Samsung A70 AX
Samsung A70s AX
Samsung A71 AX
Samsung A80 AX
Samsung A90s AX
Galaxy S9 na Rịba ama 9 nso
Galaxy S10 na Rịba ama 10 nso
Galaxy S20 na Rịba ama 20 nso
Galaxy Z Fold na Z Flip nso
Naanị anyị ga-arụnye ngwa Ekwentị Ekwentị gị (a na-etinye ya na mpaghara ya), mepee ntọala ngwa ahụ Ekwentị gị na Windows ma jikọta ngwaọrụ abụọ.
Ọ bụrụ na ịnweghị Samsung smartphone ị nwere ike iji ngwa a nweta ọdịnaya dị na smartphoneBụrụ ya ozi, foto, vidiyo na ọbụlagodi ịkpọ oku ekwentị.
Ekwentị gị Companion - Windows Connection
Ihe ngwọta na-adọrọ mmasị ma a bịa n'igosipụta ọdịnaya nke ihuenyo nke ama anyị na PC, Windows ma ọ bụ macOS, bụ 5KPlayer, ngwa kpamkpam n'efu que Ọ dịghị achọ ka wụnye ngwanrọ ọ bụla na ngwaọrụ mkpanaka.
Ngwa a bụkwa ihe ọkpụkpọ vidiyo, dakọtara na usoro niile ejiri rụọ ọrụ taa, gụnyere MKV. Ọ na - enye anyị ohere ndakọrịta na DLNA, ọ na - arụ ọrụ na - enweghị eriri site na netwọk Wi-Fi na, dịka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ọ na - enye anyị ohere ibudata vidiyo na YouTube, Dailymotion, Vimeo ...
Onye nwe ha
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ nkwụsi ike na ntụkwasị obi mgbe ị na-elele mkpanaka gị na PC, n'agbanyeghị onye mepụtara ya, otu n'ime ihe nkwụnye ụgwọ kacha mma dị na ngwa AirServer, ngwa nke anaghị achọ ka anyị wụnye ngwa ọ bụla na ama, anyị naanị nwee wụnye ngwa na PC site na Storelọ Ahịa Microsoft na Mac si Mac App Store.
Ngwa a na - enye anyị ohere ịmegharị ọdịnaya nke ihuenyo nke ama ama anyị na kọmpụta, na - eme ka ọ bụrụ ngwa dị mma iji dekọọ egwuregwu anyị, mee nkuzi, lee ọdịnaya nke ekwentị anyị na nnukwu ihuenyo...
Ọ bụ ezie na a na-akwụ ụgwọ ngwa ahụ, anyị nwere ike iji ya ụbọchị 30 kpamkpam n'efu, karịa oge zuru ezu iji chọpụta ma ọ bara uru ịkwụ ụgwọ ya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji ọrụ a rụọ ọrụ oge niile, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 40 ọ na-efu, ị ga-akwụ ụgwọ ya ọsọ ọsọ na oge ịchekwara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » 8 free ngwa ele gị mobile na PC gị
Top 10 na-arụ ekwentị nke Eprel 2021
Nyocha Xiaomi POCO M3: ọ bara ya uru na nkọwa ya?